excess of life: ika loo baahan yahay , baaro ciidda macdanta dalool beerto iyadoo
ika loo baahan yahay , baaro ciidda macdanta dalool beerto iyadoo
ika loo baahan yahay , baaro ciidda macdanta dalool beerto iyadoo la isticmaalayo baaritaanka a silig strimin strainer sizeJudi Bola Online 1 cm dalool , dhibic u kala dhagaxii weynaa oo yar yar ( dhagax dixeed ) wasakh - wasakh mar la heli karo in carrada ( caag ah qashinka , oo alwaax , iwm ) waxaa laga yaabaa in ay la koritaanka xididdada dhirta dhalinyarada faragelin .
Land iyo dhexgalayo / kohe leh la barbar dhigo heer sax ah la dhammeystirey for qaboobo
Ma laga baqdo in ka badan joogu u wakhtiga la isku qasin ciida iyo dhexgalayo / kohe celi habka la isku qasin iyo kareyso 2 ilaa 3 jeer in ay dalkii iyo dhexgalayo / kohe dhammaataan xumeyd si ay u sameeyaan isku dar ah oo dhqaalaha .
Mar qas bacriminta ka kooban phosphate qaab tsp ( Triple Super Phosphat ) , SP36 , ama RP bacriminta ( Rock Phosphat ) , inta wax laga beddelo si le'eg -daloolo laga beerto , laga bilaabo 50 ilaa 150 garaam halkii dalool beerto , la siiyaa waqtiga guubaabinta dalka inay joojiyaan / kohe . Bacriminta ka kooban phosphate adeegtaa bilowdo wanaagsan koritaanka hore ee dalagga xidid beerto post degaanka , sidaas oo xididdada ka kori doono dheeraad ah iyo awood dheeraad ah si ay u taageeraan horumarka dalagga ee degaanka .
Isku dar ah ugu celi dhulka / kohe godka la beero aad u xaddiddo geedo xidid - luqunta sare loo beeray . Compact ciidda u dheer oo dhan waxyeelooyinka ka qabdka si looga hortago nabaad haddii biyo tersiram ama hit roob culus , sidaa darteed abuurka ah waxaa lagu beeray ma beddeli meel ka dib markii abuurka ah ayaa la beeray .
Torn caag ah oo ka saari miraha ka bacaha poly caag ah , ku rid miraha ee xarunta of dalool beerto leh si qoto dheer ah ee laga beddelo . Isku dar ah ugu celi dhulka iyo dhexgalayo / kohe agagaarka daloolka , oo daboolaya dhammberita bola aan dalagga xididka si xadka sare lagu taliyey waa illaa heerka of the geedo xidid qoorta iyo ma gaadho reer xiriir ( haddii laga dheefayo seedling Grafting ama TAWASAL insert ama TAWASAL caleemaha ) .
Compact ciidda ku wareegsan seedling si ay seedling istaagin si toos ah , ma mataal u hal dhinac u keeni kartaa koritaanka dhirta si ay u noqon fool xun in dhamaadka .
Isu qabsan ciidda ku wareegsan geedka waxaa looga baahan yahay dalagga istaagi karaa si toos ah iyo adag . Ciidda uskag isku dar ah in tiro ku filan oo noqon doona mid aad u crumbly sidaas inkastoo la amaano iyo tuntay kor compaction , ciidda sii joogi doono dabacsan . Compaction ciidda waxa kale oo ay ujeedadiisu tahay in uu buuxiyo si toosaba ee dhinaca of maqan suurto gal ah oo dhan by isku dar ah ee ciidda uskag in ay godka dhulka laga fogaadaa karaa marka laga beerto dalool ka waraabin jireen .
Instant shub biyo saameysey ee mugga ku filan ( 10-20 litir ) si ay dalagga sidaas ciidda qoyan iyo cokan by biyaha , sidaas ka hortagga dalagga post - beerto u engegay . Waxaa si weyn lagu talinayaa in lagu bilaabo bilowgii xilli-roobObat Pembesar Penis Vimaxaadka si ay beero dalagyada si ay u hesho siin joogto ah oo biyo ah si ay dalagga koraan . Laakiin waxaa jira fursad u bilaabi daloolka beerto iyo dhirta xilliga uu dhulku qalalan iyo inta khayraadka biyaha laga heli karaa qadar macquulka ah ee laga dhaansado si joogto ah .
Dolomite lime ku saydhaa oo ka kooban xubno ka Calsium iyo Magnesium si ay u ilaaliyaan xasiloonida ee pH ah ( degree of aysidhka ) ee dalka iyo sidoo kale bixinta qaadashada nafaqada dhirta dhalinyarada koray ee dalka furan yahay . Grant oo ah lime dolomite muhiim ugu ah dhirta , gaar ahaan formation of burooyinkoodii cusub ee dhirta dhallinyarada ah iyo magnesium sahayda nafaqo galay qabanqaabeyaasha hogaanka of chlorophyll ee caleemaha . Waxaan rajeenaynaa ugu dhakhsaha badan si ay u awoodaan si ay noola ilaa dhammaataan dhirta berfotosintesis koraan si fiican degaanka .
Waxyaabaha kale ee muhiim ah in la sameeyo waa buuxi gacanta post - beerto weed ah , gaar ahaan haddii ay dalkii ku yaalaa meel fog. Koritaanka ee dhirta dhallinyarada ah waxaa saamayn ku yeelan tartanka kula haramaha si dhakhso u koraya ku wareegsan geedaha yar yar . Dhirta Young inay la tartamaan haramaha ka badan xagga fowdo iyo halganka oo biyo ah waa halis waayo dhirta dhallinyarada ah . IslaAgen Bola Terpercayaddii dalagga yar oo gaari ku dhow guriga , laakiin haddii geedka iska leh wax badan oo ka mid ah dalka in u fog yahay , qaban yaranta kiimiko . Isticmaal doogga ( doogga ) desiccant firfircoon isoprofil glyphosate midoo (tusaale Roundup , SunUp , Rambo , Basmilang ) lagu qaso midoo lagu buufiyo desiccant 2,4 D firfircoon (tusaale DMA6 , Lindomin ) ee dose oo ah buufiyo calaamad dhammayn dabagal abaabulan . Marka laysku of laba sinji ah ee doogga awood u qabashada iyo soo ambo- koritaanka haramaha , cawska iyo caws broadleaf qaar ka mid ah in taako of 2 ilaa 3 bilood . Hartey waxay kiimikada Xiga waxaa la samayn karaa adigoo eegaya isku xigta ee haramaha ku kora meel isku mid ah .
Posted by Juragan Channel at 4:20 AM
According to a new survey by Right Management
How to Success Cultivation Bird Love Bird desire
ika loo baahan yahay , baaro ciidda macdanta daloo...
STRUMENTI INDRA UMANI, PARTI E FUNZIONI